49 အဘို့ရလဒ် adventure time games
ဒီရယ်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖင်လန်နှင့် Jake ဟယ်လို, သကြားလုံးတွေအများကြီး၏ညဉ့်၌ကျရောက်, ဖရုံသီး ... ကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, သင်တတ်နိုင်သမျှအများအပြားပစ္စည်းများကိုစုဆောင်းရန်ကြိုးစား
ဖင်လန်မိုဃ်းတိမ်ကိုစီးနှင့်အတူလမ်းများရှိပါတယ်ဘယ်မှာသူသည်ကောင်းကင်၌ရှုံးနိမ့်တယ်တဲ့အိပ်မက်, ရှိခဲ့ပါတယ်, သင်ရုံဖင်လန်ဂရုတစိုက်နှင့်လုံခြုံစိတ်ချစွာသူ၏လမ်းကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ရှိပါတယ်တက်သွား
ဖင်လန်နှင့် Jake, တစ်ဂူထဲမှာမိကျောင်းလွန်နှင့်ဓားကိုရတစ်လမ်းကိုရှာဖွေသူတို့၏မစ်ရှင်ပျောက်ဓားကိုရှာတွေ့ဖို့ရှိသည်။ စွန့်စားမှုအချိန်ပျောက်ဆုံးသွားသောဓား
အမှော်က Man ရဲ့ဦးထုပ်ကိုရှာဖွေနှင့်သူ၏ကျိန်စာကိုချိုးဖျက်ဖို့ Jake ရဲ့ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ခြေလက်အင်္ဂါ SE! ပျော်ရွှင်ပါစေ!
စွန့်စားမှုအချိန် Rolling ရေခဲပြင်။ ထိုရေခဲပြင်ရှငျဘုရငျမှသစ်ကြံပိုး Bun ကယ်ဆယ်ရေးဖင်လန် & Jake ကိုကူညီပါ။ စွန့်စားမှုအချိန်: တစ်ခုမှာချိုမြိန် Roll
စွန့်စားမှုအချိန်ဖွောငျ့မတျ Quest Ooo ၏မြေယာအားဖြင့်ဖြောင့်မတ်ရှာပုံတော်ကြလော့ ထိုသူရဲကောင်းရဲ့ Enchiridion ရှာရန် Ninja ၏ဗိုလ်ခြေများစစ်ချီနှင့်ဆိုးသောရေခဲပြင်ရှငျဘုရငျကနေမင်းသမီး Bubblegum ကယ်တင်ရန်။ သင်တို့အဘို့အပိုပြီးအဘယျသို့မေးမြန်းနိုင်မည်နည်း လှုပ်ရှားမှု-ထုပ်ပိုးစွန့်စားမှု Play
ထိုမင်းသမီးကိုကယ်တင်ဖို့ရေခဲပြင်ရှငျဘုရငျမှအဖြစ်ဝေးသင်တတ်နိုင်သလောက်ဖင်လန်စတင်ရန်! သင်၏ browser ပေါ့ပ်အပ်ခွင့်ပြုပါတာသေချာပါစေ, play င့်ဖို့ Start ဂိမ်းခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင် Start ဂိမ်းကိုကလစ်နှိပ်ပါပြီးနောက်ပြတင်းပေါက်ပေါ့ပ်အပ်ပျော်စရာရှိသည်, ထိုအရပ်၌ဖြစ်ပါတယ် ...
စွန့်စားမှုအချိန် fionna တိုက်ပွဲတွေလည်း
စွန့်စားမှုအချိန် Fionna Fights.Fionna ရဲ့ရန်ပွဲ Lumpy အာကာသမင်းသားအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်တစ်ပါတီမှလမ်းကြောင်း en စတင်ခဲ့သည်။ AP ရှင်းလင်းဖို့ Vampire ရှငျဘုရငျကမိုးကောင်းကင်ရန်လိုသောအသက်တာ၏အပြည့်အဝရှိပါတယ်ထွက်လှည့်နှင့် Fionna သူမ၏ကြောင်၏အကူအညီတောင်းခံရန်လိုအပ်ကြောင်း, ကိတ်မုန့်နှင့်, မာရှယ် Lee က
မာရီယို၏မိတ်ဆွေများဆန့်ကျင် Play ။ သင့်ရဲ့အပိုင်းပိုင်းနေရာမှ chessboard ကို click နှင့်သင်တို့၏ရန်သူတို့ကိုအများ၏အပိုငျးပိုငျးအနိုင်ရမှလုပ်ပါ။ သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရောင်ပိုအပိုင်းပိုင်းရရှိသွားတဲ့သောသူအနိုင်ရရှိခဲ့ပါသည်။
SpongeBob Hunter ဂိမ်း။ ဤမျှလောက်များစွာသော jellyfishes.Be သင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသေဆုံး, သတိထားစရာရှိသောကြောင့်ဒီအချိန်, SpongeBob အင်အားအကောင်းဆုံး man.It ဖြစ်လာသည်, ရေခူနှင့်အတူစစ်တိုက်မယ့်ကြီးမားတဲ့စိန်ခေါ်မှုပါ!
phineas နှင့် ferb တပါးဘောလုံးကို
ဂြိုလ်သားကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ဆင်းသက်ကြပြီ။ Phineas နှင့်သူ၏မိတ်ဆွေများ: Ferb, ပယ်ရီတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဂြိုလ်သားနှင့်အတူဘောလုံးကစားအားဖြင့်အာကာသကျူးကျော်မှကမ္ဘာမြေကာကွယ်ရပါမည်။ သူတို့ကိုဤပြိုင်ဆိုင်မှုအနိုင်ရကူညီပါ။